Safarka - Geofumadas
Maxaa dhacaya 40?
Waqti ka hor waxaan qoray maqaal ku saabsan dareenka xorriyadda, mid ka mid ah bilahaas aadka u adag. Maqaalka aan runtii ku raaxeysto akhriska mar labaad, maxaa yeelay waxay u egtahay inay ka mid tahay meelaha xoogga xilligan la kicinayo. Sawirka aan soo dhigayay wuxuu lamid ahaa kan, inkasta oo waqtigu uusan isku mid ahayn. Laakiin guud ahaan,…
Safarkaygii ugu dambeeyay 7 sawir
Waxba laguma sameeyo waddooyinka nadiifka ah ee laba toddobaad ka hor. Laakiin inkasta oo xamuulka ay tahay in la sameeyo si aan ugu dhammaanin meel cariish ah, raac baabuur ka soo gudubta waddada ama ka helo gaari-nuuca xamuulka qaada bartamaha wadada ... Tag meeshaan, fadhiiso aragtida oo waxaad dareentaa nabadda ay qorraxdu gudbineyso ...
Macnaha Nederlandka, milicsiga Laatiin Ameerika
Nederland wali waa barta tixraaca ee dhacdooyinka kaladuwan ee qaybta tikniyoolajiyadda, laakiin kahor intaan u quusin arrimaha qaarkood oo iga dhigaya inaan qoro, sida waqtiyadii ugu dambeeyay ee safarkayga waxaan rabaa inaan sii daayo tiraab miyir leh oo aniga igu sugaysa saacado badan duulimaadka soo celinta ayaa kharash badan ...
Geofumadas ... macno ahaan duulimaadka
Xawaaraha heerka dhulka: 627 mayl saacaddii Altitude 38,0e00 fuudh ka sarreysa heerka badda Fogaanta u socoshada 1,251 mayl Heerkulka halkaas: -74 darajo Fahrenheit Waqtiga la tagayo: 2:25 saacadood Waqtiga maxalliga ah: 3:00 AM Qiyaasta waqtiga imaanshaha 11:27 AM Maaha 19 saacadood ee duulimaadka, waxaan ...
Ma jiraan wax la mid ah nasashada in yar oo leh geofumaditos halkaas. Ka dib muddo bil ah oo aan la dagaallameynay shooladda gaaska methane, imtixaannada ka dib waxaan u aadnay inaan u dabaaldegno booqashada adeerkii ka dhintay Houston. Isku soo wada duuboo waxaan kaaga tagayaa xoogaa sawirro ah. Faalladaydii ugu dambaysay ka dib, waxay ku guuleysteen kaalinta koowaad ee heerka shanta qaybood ee ...
Tani waa mashruuc iskaashi oo loogu talagalay abuurista iyo cusbooneysiinta khariidadaha loogu talagalay badmaaxiinta GPS. Wuxuu ku dhashay dalka Venezuela laakiin inyar iyo ka yarba wuxuu ku sii fidayay wadamada kale ee Hispanic-ka xilli barnaamijyada moobiilku ay noqdeen kuwa caan ah oo khadka Internet-ka la heli karo. Waxaan ka helay sheekooyinka midkood ...
GPS / Qalabka, tabo cusub, safarka
Socdaal dheer oo kiilomitir ah oo dhulal kala firidhsan ayaa maalmahan dambe igu maaweelinayay. Mawduuc aan marar dhif ah kaga hadlo meeshan, iskuday ah inaan daryeelo magac la'aanta shaqadayda iyo ku faraxsanaanta la wadaaga mowduucyada teknolojiyadda kuwa kale ee la shaqeeya bulshadaan. Safarkan waxaan ku xaqiijiyey awooda ...
Midabada fasaxa iyo khadadka
Khasab maahan inay ahayd 400 sano oo aamusnaan ah, laakiin si aan halkan ugu caddeeyo waxaan kaaga tegayaa qaar ka mid ah fasaxyada wiilasha iyo gabadha indhahayga ifaya. Dalxiiska gudaha waa mid qaali ah oo xididdada ku leh carruurta. Beer waxay hirgelisaa dukaanka degmada Taulabé. Cunugaas wuxuu umuuqdaa ...
MapEnvelope waa qiiq xiiso leh oo fudud oo ka yimi nin dhadhan fiican u leh hal-abuurnimada. Haddii aad waligaa rabto inaad layaabto adoo dhahaya halkaad kujoogto qaab kale, MapEnvelope sida magaceedu sheegayo, waxay soo saartaa baqshad leh khariidad daabacan. Kaliya waa lagama maarmaan in la galo goobta, tusaale ahaan: london eye, london, uk ...
Google Earth / Maps, safarka
Safar dheer. 2 saacadood laga bilaabo Bartamaha Ameerika ilaa Miami, 8 saacadood ilaa London, 1 kale Amsterdam: waxaa lagu daray 6 jeer xiriir, waxay gaarayaan 17. Saacadda bayoolojiga ayaa la adeegsadaa ka dib markay seexato sida orsada diyaaradda. Laakiin weli caloosha ma ahan; markaa saqbadhkii waa inaan kafeega soo raadsadaa ...
Wax badan in la sameeyo, xaqiiqdii wax badan. Halkan waxaan kaaga tegayaa kuwa ugu fiican maalmihii ugu dambeeyay sawirada iga tagay dhadhan xiiso leh. Caawa waxay la jirtaa dayaxa berrito qorraxda parachico waxaad i weydiisay parachico waxaan ku siin doonaa adiga oo leh masarka ushayga oo ah chinchin-kaaga waxaan kaaga dhawaajin doonaa midabkayga loo yaqaan 'serape zapateado' waan ciyaari doonaa, Little Mermaid ...
Dhowr maalmood ka hor waxaan helay casuumaad aan kaga soo qayb galo No Waxyooday 2010 oo sanadkaan dhici doono inta udhaxeysa Oktoobar 19 iyo 20. Ma jiri doonto dhacdo ka dhacda qaaradda Ameerika, kaliya Yurub, iyo waxa ka fiican meesha Holland, taas oo tiknoolajiyada noocan ah ay u dhowdahay bandhigga Yurub.
Socdaalka, qorista, geofumando dalbashada. Iyo qorsheyntayda duulimaadka dhinaca dhinaca balli.
Safarka Mine Entremares
Safarkaygu waa dhammaaday, daallan laakiin midho dhal ah. Wax ka qabashada dhulalka cusub, daqiiqado kaftan wanaagsan iyo qoomamo mala awaal digaagga oo sameynaya xisaab iyo shaqa guri Ingiriis ah sida ugu fiican. Waxa ugu xiisaha badan, hudheel aan degay, oo marka laga reebo barkadda dabaasha, maraakiibta la marsiiyo iyo fardaha fardaha loogu talagalay ...